Ukuzola kweTropical: I-poolside Bungalow Ebanzi
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Lina
Izinyathelo ezisuka e-Nightcliff Beach, i-Jetty kanye nogu lwangaphambili, leli khaya elibanzi futhi elinethezekile libekwe endaweni efanele ukucwilisa konke lokho iDarwin kanye neNorthern Territory okufanele ikunikeze. Ngengadi enhle, elungisiwe, ihlanganisa indlela yokuphila yangaphandle edumile enikeza izivakashi ukufinyelela egcekeni elizimele elinotshani, indawo yokudlela ye-alfresco ene-BBQ kanye nechibi lokubhukuda elikhazimulayo lesitayela sasezindaweni ezishisayo. Ngaphakathi, jabulela amagumbi okulala amabili, amagumbi okugeza amabili agcinwe kahle, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye nezindawo zokuhlala ezinkulu.
Kungakhathaliseki ukuthi uqala ukusebenza ngebhayisikili nasezindleleni ezihamba ngezinyawo, ucwilisa e-Nightcliff Pool noma umane uzipholele ngaphandle, lapha uzothola indlela yokubaleka ye-Top End yokugcina. Hamba ogwini lolwandle ukuze ucwilise ukushona kwelanga okudumile kwe-Nightcliff futhi udle emalolini okudla nasezindaweni zokudlela ezivulekile noma uhlole inkaba yedolobha laseDarwin imizuzu eyi-15 nje uhamba ngemoto.
Ibekwe phakathi kwengadi enhle, le ndawo inika izivakashi indawo eyanele yokukhahlela ngaphakathi nangaphandle. Indawo evulekile yokuhlala neyokudlela igelezela kuvulandi, igcwele i-BBQ lapho ungapheka khona idili. Kunendathane yesikhala esiluhlaza salabo abahamba nezingane kanye nedamu lokubhukuda elihle lesitayela sechweba. Ikhishi elihlinzekelwe ngokugcwele lifika nesiqandisi, ihhavini, isitofu, i-microwave, i-toaster nomshini wokuwasha izitsha, kuyilapho itafula labantu abane lenza kube lula ukuhlangana ndawonye ukuze uthole ukudla okwabelwana ngakho. Ngemva kwalokho, zehlisa umoya kosofa ubambe i-TV oyikhonzile noma usebenzise indawo yokufunda ezinikele.
Indlu inamakamelo okulala amabili abekwe kahle, ahlanganiswe namalineni amasha namathawula. I-main inombhede olingana nenkosi, indawo yokugcina izinto zakho kanye nezinzuzo ezivela endlini yokugezela yangasese eneshawa, indlu yangasese kanye nobuze obubukwayo obukhulu. Igumbi lesibili lokulala linombhede ongangendlovukazi namatafula asemaceleni nezibani zokufunda futhi liseduze nelinye igumbi lokugezela uzothola ishawa nobhavu wokugeza. Izivakashi zizophinde zibe nokufinyelela elondolo enomshini wokuwasha, okwenezela kulokho okunethezeka kwakho kwansuku zonke.
Indawo engasemanzini ye-Nightcliff itholakala imizuzu eyi-15 ukuya enyakatho nenkaba yedolobha laseDarwin. Abantu bendawo bathutheleka ku-Nightcliff foreshore ngomzila wabo wokuhamba nokuhamba ngebhayisikili kanye ne-Nightcliff Pool eyisakhiwo sodumo. I-Nightcliff Jetty iyindawo ethandwayo yokubuka ukushona kwelanga futhi amaloli okudla avamise ukupaka endaweni ukuze adle epikinikini.
I-Sunday Nightcliff Markets ikhombisa uhla olukhulu lobuciko nemisebenzi yezandla kanye nokudla nokuzijabulisa kwasendaweni, kuyilapho i-Mindil Beach Sunset Market edumile inikeza ubuciko bomdabu base-Aboriginal, imfashini kanye nebhodwe elincibilikayo lokudla okumnandi. Ukusuka e-Nightcliff ukushayele okufushane nje ukuya kukho konke uDarwin angakunikeza.
Sicela ungangabazi ukufinyelela uma udinga noma yini noma udinga usizo. Sihlale silapha ukusiza, futhi sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi ngangokunokwenzeka.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$245.